ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဝန်ကြီးဌာန ၁၅ ခုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အမှုပေါင်း ၄၇ မှုကို တင်ပြခဲ့ပြီး အဲဒီဝန်ကြီးဌာန ၁၅ ခုဟာ နိုင်ငံတော်က ချပေးတဲ့ငွေ အရ၊ အသုံးနဲ့ နိုင်ငံတော်က ရရမယ့်ငွေတွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အလွဲသုံးမှု၊ ပိုသုံးထားမှု၊ မရိုးဖြောင့်တဲ့သဘောနဲ့ ဆောင်ရွက်ထားမှုတွေကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးဌာန ၁၅ ခုမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးဘတ်ဂျက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ၀န်ကြီးဌာန ၁၅ ခုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေအရ နိုင်ငံတော်ကို ပေးသွင်းရမယ့် နစ်နာငွေ ကျပ်ငွေ ၅၈ ဘီလျံကျော်နဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂သိန်း ၃သောင်းကျော် အနက် ပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိငွေတွေထဲမှာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ မှားယွင်းမှုနဲ့ အလွဲသုံးစားမှုကြောင့် ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည့်ငွေက ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၄၃သန်းကျော်ရှိနေတယ် လို့ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်တင်သွင်းတဲ့ အစီရင်ခံစာအရ သိရပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ ကုလသမဂ္ဂထံ တင်သွင်းမည်
အမျိုး ဘာသာဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခု လွှတ်တော် တင်သွင်း
If we carefully look at the above remarks by The Auditor General,AG, it is very very obvious most of the Government officers and their supporting staff are misusing our assets that must be available for country development or alleviating the poverty. In fact, there could be much more corrupts which AG missed out to discover. Also, as far as we know corruption means same for all committed irrespective of the amount misused. If our country leaders are really sincere, loyal to the country and respectful to the people, they should take actions on The AG,s report otherwise the people will loose their confidence and respect to them. And also, The AG will be disappointed to sincerely and bravely disclose such valuable facts in future and possibly he will change his mind to cooperate with the corruptive gangs. Anyway, we sincerely praise The AG U Thein Htike for his excellent report. Thank you Sir
Nov 15, 2012 09:19 PM